minminsoeadb's Page - Myanmar Network
ကျောင်းများ၊၊ကျုရှင်များတွင် အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ပက်သက်၍ သင်ကြားရေးနည်းစနစ်တွေ၊ပြောင်းသင့်ပြီဟု မိတ်ဆွေယူဆလျှင် တက်နိူင်သည့်ဘက်မှ ကူညီပေးပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
Started Sep 26, 20120Replies2Likes
အစိုးရကျောင်းမှာ… အစိုးရကျောင်းတွင် တက်ရောက်နေသော ကလေးငယ်တစ်ဦး စနေနေ့ညနေခင်းအချိန်တွင် ပြင်ပကျုရှင်တစ်ခု၌ အင်္ဂလိပ်စာမီးနင်းများကို အသဲအသန်ကျက်နေသည်။သူ့ပါးစပ်က အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေသော်လည်း သူ့စိတ်က…Continue
Started this discussion. Last reply by ayeayeswe Jun 11, 2014. 86 Replies 63 Likes
နှုတ်ဆက်ကြပါပြီ။ဟိုင်း၊ဟဲလိုတဲ့ဗျား။ဟိုင်း၊နေကောင်းလား။မသေသေးဘူးမဟုတ်လား။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘယ်ကလာတာလဲ။ ဘယ်မှာနေတာလဲ။သြော်.ငရဲပြည်မှာနေတာလား။ပုံလေးက လှတယ်နော်။ဒါနဲ့ ဂျီမေးက ဘာလဲ။တရက်တရက်…Continue
Started this discussion. Last reply by AshinDamahar Nanda Jun 16, 2015. 10 Replies 16 Likes
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေဆုံရင် အမြဲတမ်းပြောဖြစ်တဲ့ စကားတခွန်းရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်အချိန်မှာ တက်မှာလဲ။တက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပေါ့။နဲနဲလေး မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်မှ လွဲ၍ ကျန်တဲ့လူများက…Continue
Body Language ဟာ ဆက်သွယ်ရာမှာ အရေးကြီးဆုံးလား။
Started this discussion. Last reply by 29oy369nrc4f1 Feb 24, 2012.4Replies 13 Likes
အင်္ဂလိပ်စာကို အရမ်းကို ကျွမ်းကျင်ပြီး အသံထွက်ကို တထေရာတည်းထွက်နိုင်တဲ့ ဆရာကြီးတွေအတွက်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လို လေ့လာနေဆဲ၊သို့မဟုတ်၊အင်္ဂလိပ်စာကို ဗမာအချင်းချင်းသာ လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့…Continue
Red Ribbon From 2p6c6hlc4ttvv Yellow Ribbon From Tiffany
At 22:57 on November 30, 2012, Mi Ko said…
Hello.Nice to see u in Myanmar network.Go and start our discussions.
At 18:21 on May 1, 2012, Bellinda Tseng said…
I like your every post.Your writing is very directly and reasonably.May be my usage is not grammatical but I want to discuss with you and make myself to improve my English skill.If you see errors,let me know. :)
At 11:59pm on April 22, 2012, Tiffany gave minminsoeadbagift…
thanks to invite me asafriend. Your discussion is very good, I appreciate you .
At 0:23 on March 29, 2012, ပိုင်လေး said…
At 12:32 on March 13, 2012, Nang Nang said…
Hi friend how are you? .... nice to meet you here .... haveagood day for you